nefilosofi kaMarx enikeziwe ithuba elihle kakhulu ukubheka izinto ezejwayelekile ngendlela ehluke kakhulu. Umnikelo eyenziwe Marx ekuthuthukiseni wefilosofi hhayi kuphela, kodwa futhi umlando emhlabeni, uyigugu ngempela. nefilosofi Marksistskaya sihlanganisa imisebenzi efana sibalo esikhulu Fridrih Engels. Marxism ngokwayo - imfundiso kaZiqu abanzi. Lihlanganisa nefilosofi kaMarx-Leninist, okuyinto aluthola kwakhishwa ephelele ngo namathathu banesifo esibi kwekhulu elidlule.
Ukuvela nokuthuthukiswa wefilosofi kaMarx libhekisela ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule. Le mfundiso ihilela izimpikiswano setepolitiki, wezomnotho kwezombangazwe.
Ifilosofi Marxism oye wakwazi ukunikeza izimpendulo izindaba ezibaluleke kakhulu ngesikhathi sakhe. Ukusabalala kanye ithole futhi ezindaweni eziningi zomhlaba. Kwamanye amazwe, lokhu ifilosofi ubelokhu eqashelwa njengoba imfundiso engokomthetho, elakhiwa ngesisekelo imibono yabantu kwezenhlalo nakwezombangazwe.
nefilosofi kaMarx awakaze ezifana ngayo, ngaphandle izinto ifilosofi esingumGreki, Democritus, Locke nezinye ongqondongqondo abaningi. Futhi nomthelela ekuthuthukisweni yayo futhi ukuvela nokwanda okusheshayo kwenani izinhlobo ezahlukene okutholakele lobuchwepheshe nesayensi. Lezi zihlanganisa kokutholakala umthetho ukulondolozwa amandla, ukuthuthukiswa kwe-mbono yokuziphendukela kwemvelo, kokusungulwa kwemoto, izithombe nokunye. nefilosofi kaMarx safika ngesikhathi esifanele lapho kukhona kwezifiso entsha, kodwa umphakathi yayingazimisele ukwenza nizenza, lapho ukuphikisana ekilasini baye Iloliwe ngangokunokwenzeka, lapho isimo esibucayi waqala bendabuko wobunxiwankulu amagugu.
Ngokuvamile, wonke nefilosofi kaMarx kungenziwa ihlukaniswe izingxenye ezimbili. Engxenyeni yokuqala konke kuhlobene nokuthanda izinto ezibonakalayo dialectical, kwesibili - konke ehlangene izinto ezibonakalayo zomlando.
ebamba isisu izinto yomlando - Engels futhi Marx emisha. essence yayo imi kanje:
- At ngezigaba ezahlukene zentuthuko yomphakathi ukuze abantu nihlanganyele - indlela kuphela bakwazi ngokuvamile ukunikeza izimpilo zabo. Lezi ubudlelwano kukhona elikhiqizayo. Ziyakwazi umgomo futhi akuncikile izifiso zabantu babo.
- Kumiswa isimiso sezomnotho is nje ngesisekelo ubuhlobo zokukhiqiza. Ngu uqobo, kuba isisekelo okuqinisekile okuyinto ukwakha izinhlobo ezahlukene ezikhungweni zomphakathi ubudlelwane futhi isimo.
- Izikhungo oshiwo ngenhla, bawuhlobo isengezo kwezomnotho isisekelo.
- Superstructure futhi isisekelo kuhlobene. Ngesisekelo zabo uyakwazi ukuhlukanisa izinhlobo ezahlukene zokwakheka kwezenhlalo noma kwezomnotho.
- Inkambo umlando kunqunywa ukukhiqizwa impahla, ezingeni emnothweni, ubudlelwano zokukhiqiza.
Izindlela zokukhiqiza , ngokuvumelana Marx - yilokho kwenza kube nokwenzeka ukukhiqiza umkhiqizo omusha ngosizo kwetisebenti. Njengomthetho, bakude abasebenzela inkokhelo, ukuthi bagxila ezandleni abanikazi. Into wukuthi iningi labantu okusinda kufanele azivumele ukusizakala.
emphahleni ezibizayo kwandziswa izindlela zokukhiqiza kanye amaholo zabasebenzi. Umehluko libizwa ukubaluleka isivuno sisiningi kakhulu khona. Ingxenye kuba capitalists ukuthatha bona, futhi abanye wathumela wenani entsha isivuno sisiningi kakhulu khona.
Hegel sika dialectic - ngesisekelo izinto ezibonakalayo dialectical. Marx no Engels wathatha amanye imibono wesazi sefilosofi omkhulu wawabeka ehlukile.
Ifilosofi dialectical uthi ngiqaphele kunqunywa khona, ndaba njalo elokhu ivela nokushintsha, ngokusekelwe imithetho wokuthuthukisa ncamashi dialectic, uNkulunkulu engekho, kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthuthukiswa - umkhuba.
Ufuna ukwazi indlela ukubhaka, broil upheke ummbila?